I-SEASCAPE BEACH RESORT IFANELWE YIGAMA-IINDABA ZEMERCURY - IINDABA
I-Seascape Beach Resort ifanelwe leli gama
Yimpelaveki entle eshushu kunxweme lwaseSanta Cruz, kwaye bendifunda elunxwemeni ngaphezulu kweeyure ezimbini.
Ezinye iindawo zisebenzisa iresort yegama ngokukhululekileyo, zongeza ubungangamsha kwihotele entle. KwiResort yaseSeascape Beach ileyibhile iyathetheleleka, inika indawo yokubalekela apho iimoto zinokuhlala zingasebenzi ngelixa iindwendwe zibambene ngokupheleleyo. Apha, inkonzo kunye nezinto eziluncedo ziphezulu-notshi, kwanokubonelela nge-shuttle yokufowuna ukuthatha iindwendwe malunga nepropathi. Umoya uhlala ungaqhelekanga. Yindawo entle yokuphumla, enemisebenzi eyaneleyo yokugcina abantu abadala kunye nabantwana ngaphezu kokwaneliseka.
Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide ziikhilomitha ezili-10 kumzantsi weSanta Cruz kwimihlaba entle ejonge eMonterey Bay. Ineeyunithi ezingama-283 eziphangaleleyo, ukusuka kwiisuti zesitudiyo ukuya kwiivillas ezinamagumbi amabini olwandle. Ndihlala kwigumbi elinye lokulala elitofotofo kangangokuba ndingalenza ikhaya lam eli. Impahla yegumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala zisebenzisa izikimu zemibala kunye nemibala ebonisa ubuhle, kodwa isimbo saselwandle esikhululekile. Umabonwakude oneDVD player kunye neInternet ekhawulezayo undenza ndihlale ndikhumbula. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo, kwaye ibalcony yam yabucala ibonelela ngeembono zolwandle ezijikelezayo.
Kulula ukuhlala usebenza apha kunye namachibi amathathu okuqubha, iindledlana ze-bluff-side ezibaleka ububanzi bepropathi kunye nendlela ye-canyon eluhlaza ukuya kunxweme olubanzi, olumhlophe lwesanti. I-Seascape Sports Club ibonelela ngentenetya, iziko lokuzilolonga kunye neeklasi, kunye nephuli yokuphumla. Kubadlali begalufa, ikhosi enemingxuma eli-18 ikwimizuzu nje embalwa. Xa ilixesha lokuphumla, unyango lwe-spa kwigumbi longeza ukuzonwabisa.
Ndigcine itanki yam yerhasi igcwele ngokuthatha iisampulu ezintsha, ezifumaneka kwindawo yokutyela eSanderlings kwindawo yokutyela, ndihlaziya umbono okwitafile yam yepatio. Ngaphesheya kwesitrato, iSeascape Village inokwanelisa uninzi lwendlala ngokutya kwamaTshayina, ipizza, iwayini kunye notywala, ikofu entsha kunye nePalapas yokutyela yaseMexico, egxile ekutyeni kwaselwandle. I-Seascape Foods idibanisa ivenkile yegrosari kunye nokutya okusele kukulungele ukuhamba, iisandwich kunye neesaladi.
Xa ubusuku bufika, ulwandle kunye neenkwenkwezi zikhahlela umlilo wakudala waselwandle. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide ilungiselela izitulo ezijikeleze umlilo ovuthayo kwaye ibonelela ngazo zonke izithako ze-marshmallow-and-chocolate s'mores, kunye namanzi. I-shuttle iya kukuhlisa kwaye ikubuyisele egumbini lakho. Kutheni umntu efuna ukuya ekhaya?